Bakhtiyaanasiibka Bakhtiyaa-nasiibka ee Kiptaş Silivri Marxaladda 3aad Guriyeynta Bulshada Berri | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulBakhtiyaanasiibka Bakhtiyaa-nasiibka ee Kiptaş Silivri Marxaladda 3aad Guriyeynta Bulshada Berri
21 / 05 / 2020 34 Istanbul, GUUD, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Silivri etap guryaha bulshada bulshada sawiro berri
Mashruuca Guryeynta Bulshada ee Kiptaş Silivri 3aad, guryaha dabaqa ah ee kun kun 513 ka-faa'iideystayaal ah waxaa lagu go'aamiyaa iyadoo saamiyo laga helay Madaxweynaha EkBB Ekrem İmamoğlu. Isku aadka, oo berri dhici doona by notary, ayaa si toos ah loogu baahin doonaa xisaabaadka warbaahinta bulshada ee IMM iyo Kiptaş.
Guryaha Bulshada ee Silivri Heerka 3aad, oo ay dhammeystireen Shirkadda Isgaarsiinta Magaalada Istanbul ee KIPTAS, ayaa heley milkiilayaasheeda. Bakhtiyaa-nasiibka bakhtiyaa-nasiibka, oo loo qorsheeyay in la qabto 22-ka Maarso 2020, ayaa la kansalay iyadoo la raacayo tillaabadii laga qaaday dalkeenna dartiis daacuunka faafa. Sababtoo ah xayiraadaha sii socda, maamulka Kiptaş waxay go'aansadeen inay qaadaan baahinta tooska ah ee bakhtiyaanasiibka.
MARKA LOO BAAHAN YAHAY LUUQADAHA
Isku aadka ayaa la qaban doonaa 22 subaxnimo Jimcaha, May 10.00 iyadoo ay ka qeyb galayaan Madaxweynaha İBB Ekrem İmamoğlu iyo Maareeyaha Guud ee Kiptaş Ali Kurt. Bakhtiyaanasiibka ay qabtaan nootaayaha guud, guriyeynta halkaas oo kuwa xuquuqda lahaada ay u gudbi doonaan nolol cusub ayaa go'aan laga gaari doonaa. Bakhtiyaanasiibka waxaa si toos ah loogu baahin doonaa xisaabaadka warbaahinta bulshada ee Kiptaş iyo İBB TV.
Guryaha Bulshada ee Silivri 3aad wuxuu ku yaal 5 daqiiqo meel u jirta wadada weyn ee E5 iyo TEM Highway ee xaafada Alipaşa ee degmada Silivri. Mashruuca, waxaa ku yaal 447 2 + 1 guryo, 66 3 + 1 guryo iyo sidoo kale dugsi hoose oo ka kooban 26 fasallo, 4 sheybaar, masaajid 300 oo qof, xarun caafimaad iyo 7 unug ganacsi.
Qeybaha Abriil iyo Meey ayaa dib loo dhigay muddo laba bilood ah ka-faa'iideystayaasha heerka saddexaad ee Silivri oo laga yaabo inay dhibaatooyin ka haystaan ​​geeddi-socodka faafa, halka bixinta ku-meelgaarka ah ee Maajo lagu meeleeyay afar qaybood oo siman oo ah Bishii Luulyo, Agoosto, Sebtembar iyo Oktoobar.
Kadir Topbas: Metrobus ayaa loo kordhin doonaa Silivri, Markabka Silivri ayaa imaan doona!
Wadada 144A ee wadada Deliklikaya-Ömerli Kiptaş-Avcılar waxaa la bedelay khadkii Metrobus
Tallaabo talaabo leh lambarro Kabataş-Mahmutbey metro line
Gaadiidka Hamitler ee Bursa ayaa galaya marxaladda masraxa.
Waa Maxay Saldhigyada Marmaray Ku Darayaan Qiimaha Guriyeynta?
Halista Metro Metro ee Guryaha Shaqada
Tareen tareen dheere ah oo ku daadanaya Pendik
Nidaamka Iskudhafka Guryaha ee Döşemealtı TOKİ
Haystayaasha Xuquuqda Heerka 3-aad Silivri
Silivri 3. Marxaladda Guriyeynta Bulshada
Mashruuca Adana Light metro Nidaamka (Marxaladda 2-aad) waxaa lasiiyay Yapım kii ugu horreeyay
Istanbul Metro waxay aadi doontaa Silivri